Inona avy ireo fotodrafitrasan'ny taratra optique? Famaritana misimisy amin'ny vato
Ny fototarazan'ny optique rindrina dia vokatry ny làlam-pifandraisana mifandraika amin'ny rafitra kristaly amin'ny vatosoa. Io fifandraisana io na ny fanelingelenana dia mety amin'ny endriky ny fiparitahan'ny hazavana, ny fandinihana, ny fandrefesana, ny tsindrona, ny fanodinana na ny fifindrana.
Adularescence dia fisehoan-javatra manga manjelanjelatra izay hita taratra eo amin'ny faritra cabochon misy an'i Moonstone. Ny fisehoan'ny shimmer dia avy amin'ny fifandraisan'ny hazavana miaraka amina kristaly "albite" kely amin'ny vatom-bolana. Ny hatevin'ny soson'ireny kristaly kely ireny dia mamaritra ny kalitaon'ny manga shimmer. Manify ny sosona, tsara kokoa ny jiro manga. Matetika izy io dia miseho ho toy ny jiro mivaingana. Moonstone dia feldspars orthoclase, anarana iray hafa dia "selenite". Nantsoin'ny Romanina hoe Astrion.
Matetika ny fisintonana vy no misafidy ny manapaka ny endrika cabochon, rehefa vato ambany ny kalitaony. Amin'ny vatosoa sy vato toy izany rehefa mianjera eo amin'ny tandroka cabochon ny hazavana ary mahatonga ny kintana tahaka ny kintana, dia antsoina hoe asterisme io tranga io. Misy karazana 4 ray sy 6 ray amin'ny ankapobeny. Izany dia mitranga rehefa manitsy ny fanjaitra toy ny tsangambato na seza ao anatin'ny kristaly ny mikambana mihoatra ny iray.
Avy amin'ny anarana frantsay hoe "Chat" midika saka. Chatoyancy dia manondro trangan-javatra iray mitovy amin'ny fanokafana sy ny fanidiana ny mason'ny saka. Azontsika atao ny mijery amin'ny lokon'ny maso chrysoberyl miaraka amin'ny mazava tsara. Ny vatosoa saka saka dia manana tarika maranitra tokana, indraindray tarika roa na telo, mivezivezy manerana ny haben'ny cabochon. Ny vatosoa mason-tsaka amin'ny endrika cabochon dia voatanisa amin'ny chatoyancy. Ny fanjaitra mahitsy amin'ny firafitry ny vato dia mifanaraka amin'ny fisehoan-javatra. Ka rehefa milatsaka eo aminy ny hazavana dia hita ny fatorana maranitra. Amin'ny tranga tsara indrindra, ny maso chrysoberyl chatoyant dia manasaraka ny masony ho roa. Afaka mahita ny vokatry ny ronono sy tantely isika rehefa mihetsika eo ambanin'ny hazavana ilay vato.
Ny herisetra dia fantatra koa amin'ny goniochromisma, tranga iray izay ahitana ny loko misy loko iray mampiseho loko maromaro toy ny fijerin'ny fahitana fiovana. Mety ho hita eo amin'ny vozon'ilay taolan-tehezana, bala afovato, elatry ny lolo, renin'ny perla sns. Ny tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny habakabaka sy ny habakabaka midadasika dia mamela ny hazavana handefasana sy hisaintsainana avy amin'ny sehatra maromaro (diffraction) miteraka loko maro maso. Miaraka amin'ny fihenjanana, ny vokatra dia mampihetsi-po. Ny perla voajanahary dia mampiseho tsy firaharahiana izay tsy mitovy amin'ny lokon'ny vatana. Ny perikopa Tahisiana dia mampiseho firaiketam-po lehibe.
Lalao ny loko
Ilay vatosoa mahafinaritra antsoina hoe opal dia mampiseho loko mahafinaritra. Ireo opalin'ny afo avy any Lightening Ridge, Aostralia (mampiseho ny fiovan'ny lokon'ny loko misy ny loko mainty) dia malaza amin'ity tranga ity. Na dia karazana iridescence aza ity lalao miloko ity dia saika antsoin'ny mpivarotra vatosoa rehetra hoe "afo" izy io. Ny afo dia teny gemolojika, ny fanaparitahana ny jiro taratra amin'ny vatosoa. Hita matetika amin'ny diamondra izy io. Fielezana hazavana tsotra io. Raha misy opal dia tsy fanaparitahana izany ary noho izany dia tsy mety ny mampiasa ny teny hoe "afo".
Ny ohatra tsara indrindra amin'ny fanovana loko dia ny alexandrite. Ireny vatosoa sy vato ireny dia toa tsy mitovy amin'ny taratra mazava raha oharina amin'ny hazavan'ny andro voajanahary. Ny ankamaroany dia vokatry ny vatosoa vatosoa firavaka ary koa ny fitrohana mahery mifantina. Ny alexandrite dia miseho maitso amin'ny antoandro ary toa mena koa amin'ny jiro mandrehitra. Ny safira, koa ny tourmaline, alexandrite ary ny vato hafa dia afaka mampiseho fiovan'ny loko.
Ny labradorescence dia karazana tsy firaharahiana, fa tena fitarihana noho ny fitarihana kristiana. Afaka mahita izany amin'ny labradorit gemstone.